Toerana mora vidina handehanana any Eropa izay tokony ho fantatrao | Fitsangatsanganana tanteraka
Toeran-kaleha mora hivezivezena any Eropa
Susana godoy | | ny hafa
Raha tianao ny mandeha, saingy tsy dia araka ny itiavanao azy no anaovanao azy, dia satria tsy fantatray ny toeran-kaleha mora vidina any Eropa. Betsaka ny teboka izay tsy hanimba ny paosintsika araka izay azontsika eritreretina. Koa satria ny tapakilan'ny fiaramanidina dia mipoitra ihany koa ho mora.
Izany no antony raha mbola manana ianao fety, azonao atao foana ny mampiasa azy ireo amin'ny fomba tsara indrindra. Asehonay anao ny andiana toeran-kaleha mora vidy handehanana any Eropa ary lazainay aminao ny hatsarana izay ho hitanao eo. Azo antoka fa te-hitsidika ny tsirairay amin'izy ireo ianao!
1 Toeran-kaleha mora hivezivezena any Eropa, Naples
3 Vilnius, renivohitr'i Lituania
7 Aalborg, iray amin'ireo toeran-kaleha mora vidina any Eropa
Toeran-kaleha mora hivezivezena any Eropa, Naples
Na dia iray amin'ireo tanàna be mponina indrindra any atsimon'i Italia aza izy io dia tsy dia matetika ny fizahantany no misy azy. Samy manana ny antony ny tsirairay avy, saingy tokony holazaina fa tsy mahagaga raha manana sidina avy any Madrid sy Barcelona isika manodidina ny 50 euro. Mazava ho azy fa miresaka tolotra sasany isika, saingy miseho izany matetika. Rehefa tonga any dia tsy maintsy mankafy ny tranobeny ary koa ny lalambe na ny kianja. Ny Royal Palace na ny Archaeological Museum dia teboka iray hafa amin'ny fitsidihanay. Amin'ny sakafo atoandro dia misy trano fisakafoanana manome pizza tsara eo amin'ny 5 euro.
Irlandy no toerana iray malaza indrindra ho an'ireo mpizahatany. Saingy amin'ity tranga ity dia tavela amin'i Belfast isika momba izany. Io no tanàna lehibe indrindra any Irlandy Avaratra. Anisan'ireo toerana mahaliana azy ireo koa isika manomboka amin'ny lapan'ny tanànany, misy dome mihoatra ny 50 metatra ny haavony, hatrany amin'ireo tranombokiny na tranobe vita Victoria. Tsy misy isalasalana, ny fitsangatsanganana an'ity faritra ity dia mitarika antsika hiresaka tantara sy angano ihany koa. Ny zavatra tsara indrindra dia amin'ny toerana toa izao dia tsy miresaka politika na fivavahana isika. Amin'ny ambiny, faritra azo antoka izy io ary ahafahantsika mankafy azy io tranombakoka natokana ho an'ny Titanic. Avy any Barcelona dia tsy hanana fijanonana mankany Belfast ianao ary indraindray, manodidina ny 70 euro, afaka mankafy ny tapakila ianao.
Vilnius, renivohitr'i Lituania
Raha mankany Litoania isika, dia afaka mahita safidy ara-toekarena amin'ny fitsidihana ny renivohitra. Angamba toerana tsy dia fantatra loatra ho an'ny besinimaro izy io, saingy misy safidy manokana ho an'ny mpandeha. Mizara ho distrika 21 izy io. Izy io dia manana maritrano be dia be, ka afaka mahita trano misy fomba maro isika. Lapan'ireo andriana feodaly, atrikasa ary arabe tery misy fiolahana maro no sasany amin'ireo zorony. Ho fanampin'ireo fiangonana 65 izay eto amin'ity toerana ity. Ny tanànany taloha dia iray amin'ireo lehibe indrindra eran'i Eropa. ny Vilnius Castle complex na Gediminas Tower dia teboka hafa tokony horaisina.
Izy io koa dia iray amin'ireo toeran-kaleha mora vidina any Eropa. Mety nisondrotra kely ny vidiny, saingy maherin'ny 100 euro dia afaka mankafy tapakila mandroso sy miverina ianao. Iray amin'ireo toerana fototra hitsidihana ny National Museum. Saingy miresaka momba ny tranombakoka isika, ny miaramila, ny fiaramanidina na ny Museum Ethnographic dia tsy dia taraiky any aoriana. Fa iray hafa manintona ity toerana ity ny maro ny hetsika mitranga mandritra ny taona: Avy amin'ny festival film, festival teatra, fampirantiana boky na foara labiera.
Anisan'ny toerana malaza indrindra, io no iray amin'ny mora indrindra. Marina fa mpizahatany maro no misafidy ny renivohitr'i Gresy noho ny fialan-tsasatra sahaza azy ireo, saingy noho izany antony izany dia mandoa vola bebe kokoa. Toy ny voalaza teo aloha, manodidina ny 100 euro ny sidina. Marina fa tsy miresaka vanim-potoana lehibe isika, fa tsy misy fisalasalana, ho an'ny maro amintsika dia mendrika ihany koa izy ity amin'ny fankafizany ny lova arkeolojika lehibe. Ny Acropolis miaraka amin'i ny Parthenon the Agora na ny Tempolin'i Zeus Olympian no sasany amin'ireo hevi-dehibe.
Betsaka ny toerana itodiana any Frantsa, saingy tavela miaraka amin'i Nantes, izay misy antsika, isika ankehitriny eo amoron'ny Loire. Any isika dia afaka mankafy ilay antsoina hoe Plaza Royale, izay mampifandray ireo faritra taloha sy vaovao. Ny katedraly San Pedro sy San Pablo, ny Basilika ao San Nicolás na ny Castle of the Dukes, no sasany amin'ireo hevi-dehibe azontsika vangiana. Tsy vao sambany no mahita sidina avy any Madrid mankany amin'ity toerana ity miala 50 euro isika.
Aalborg, iray amin'ireo toeran-kaleha mora vidina any Eropa
Any Danemarka dia mahita tanjona iray hafa mahavariana ihany koa isika ary mazava ho azy, mora vidy raha mikasa ny hividy tapakila fiaramanidina isika. Io no tanàna fahefatra lehibe indrindra any Danemark. Azontsika atao ny manomboka ny fitsidihantsika ny tranony. Ho fanampin'izay, tsy azonao atao ny tsy mahita ny trano tsara tarehy indrindra nanomboka tamin'ny taonjato fahafito ambin'ny folo. Ny fiangonana Budolfi na ny tranombakoka dia hafa noho ny fijanonana tsy maintsy atao. Hanana sidina afaka mandeha 120 euro ianao, sahabo ho eo.
Làlana feno mankany amin'ny lahatsoratra: Fitsangatsanganana tanteraka » Toeran-kaleha mora hivezivezena any Eropa
Tanàna tsara tarehy akaikin'i Madrid
Zagreb, inona no ho hita